CAKE IYO CUNTO KARIYE, MAXAY YIHIIN FARQIGA U DHEXEEYA ALAABTA - CUNTADA XAYAWAANKA
Ugu Weyn Ee Cuntada xayawaanka
Keega iyo moofo saliid ah waa noocyo badan oo ah qashinka ugu caansan ee wax soo saarka farsamooyinka ugu muhiimsan ee loogu talagalay geeddi-socodka gabbaldayaha.
Caadi ahaan, farqiga u dhexeeya keegga iyo cuntada waa mid aan muhiim ahayn, maadaama ay helayaan wax soo saarka saliid gabbaldayaha iyo waxyaabaha kale ee cuntada.
Iyada oo ay ku xiran tahay heerka sare ee walxaha macdanta, fitamiinada iyo qaybaha waxtarka leh, kuwan soo saarka ah looma isticmaalo, laakiin si firfircoon ayaa loo isticmaalaa beeraha sida quudinta. Waa wax ku ool ah oo wax ku ool ah si loogu isticmaalo quudinta cunnooyinka caanaha, kuwaas oo caafimaadkoodu aad ugu tiirsan yahay qadarka borotiinka la isticmaalo.
Qeybaha, amino acids iyo borotiinka ku jira waxay ku tartami karaan quudinta qaaliga ah ee firida. Isla mar ahaantaana, waxyaallaha faleebku waxay saameyn wanaagsan ku yeelan karaan maaddada dheef-shiidka xayawaanka beeraha iyo shimbiraha. Hase yeeshe, inkastoo muuqaalka aqoonsiga ah ee cunnooyinkaas, haddana waxaa jira khilaafyo u dhaxeeya iyaga. Sidaa daraadeed, isticmaalka haboon, ugu horeyntii, waxaad u baahan tahay inaad fahamto waxa cunta ah iyo waxa muuqaalkoodu yahay. Run, arin muhiim ah oo muhiim ah waa farqiga u dhexeeya keegga cuntada.
Waa maxay miro kulul
Qashinka laga soo saaro wax soo saarka ugu weyn ee geedi socodka geedi socodka ayaa la xaqiijiyay inuu yahay badeecada ugu fiicantaasoo ka dhalata wax-qabadka fudud ee fudud. Waa caanaha quudinta sida cake. Laakiin waa maxay macmacaanka gabbaldayaha, iyo nooca nooca looyaqaano, weli waa in la fahmo. Waxaa la helaa iyadoo lagu burburinayo abuurka gabbaldayaha heerkulka tikidhada iyo alaabta hadhaaga ah waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan uguna qiimaha badan ee ku dhowaad wax kasta oo quudiya xoolaha beeraha iyo shimbiraha.
Ma taqaanaa? Tobaneeyo sano ka hor, keega waxaa laga heli karaa oo keliya goobaha, laakiin hadda waxaa lagu abaabulay qaab muuqaal ah. Thanks to technology teknoolajiyada, waxaa lagu kala soocay midab khafiif ah oo shaambe iyo ur ah jilicsan, ur xun.
Oilcake sunflower, oo macquul ah in lagu quudiyo lo'ada, digaaga, bakaylaha, idaha iyo xayawaan kale oo badan, waxaa lagu gartaa diirada sare ee borotiinka, baruurta caanaha, fiber iyo waxyaalo kale.
Waxaa sabab u ah ka kooban iyo qiimaha nafaqada ee badeecadda, dheef-shiid kiimikaad ee jirka xoolaha beeraha waa la hagaajiyay, iyo xajmiga baruurta iyo koritaanka xayawaanka ayaa sidoo kale si aad ah u dedejiyey. Compound feed kula dheeraad ah ee alaabta ee processing ee gabbaldayaha ayaa qiimaha korontada oo ka sarreeya shuruudaha quudinta dalagga. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo xaqiiqda ah in cake uu ka shaqeynayo tiknoolajiyada tiknoolajiyada, iyadoo loo eegayo tayada badeecada kama dambaysta ah ayadoo si toos ah ugu xiran tayada hore ee miraha gabbaldayaha lagu shaqeynayo.
Waa muhiim! Habka loo dooranayo cuntada qorraxda waa in si taxaddar leh loo daaweeyaa. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in haddii tiknooloojiyada wax soo saarka ay dhibayso, waxay noqon doontaa sun iyo wax aan habboonayn in loo isticmaalo sida quudinta.
Qeexida cuntada cadceedda
Dhawaan, caan ka mid ah cuntooyinka dhirta ayaa la xusay, oo ay ka mid tahay cuntooyinka qorraxdu ka qaadato mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan. Laakiin dad badan ayaa weli la yaab leh: "Cunto karisey: waa maxay?" Cunto karis - badeecad ah mid ka mid ah quudinta ugu qiimaha badan ee loo isticmaalo aag gaar ah ee beeraha. Isticmaalkeeda waxay suurtogal u tahay in si weyn loo kordhiyo qiimaha beeraha xoolaha iyo shimbiraha.
Ma taqaanaa? Sannad kasta dunidu waxay soo saartaa in ka badan 9 milyan oo tan oo badeecad isku mid ah, laga soo qaado sun-gabbalaha. Isla mar ahaantaana, Argentina, Ruushka iyo Ukraine ayaa ka mid ah hogaamiyaasha dalalka, iyo iibka firfircoon waxaa lagu fuliyaa adduunka oo idil.
Badanaa, quudintani waxaa la siin karaa hab nololeed, ma aha oo kaliya qaabkeeda saafi ah, laakiin sidoo kale qayb ka mid ah quudinta badan.
Laakiin waa maxay cuntada? Qeexitaanka ugu caansan, waa wax soo saarka warshadaha waaweyn ee warshadaha saliid gabbaldayaha. Cawska u dhexeeya caadiga ah iyo tolida, taas oo ah, qufac culus oo la warshadeeyay.
Baro sida loo sameeyo cunto digaag ee broiler, digaagga, goslings, boodhka, riyaha, weylaha, doofaarrada.
Ka baxsan, badeecadan quudinta ah waxaa lagu soo bandhigaa qaabka loo yaqaan granules iyo / ama boodeyaal leh caraf udgoon leh.
Halabuurka loo yaqaan "sunflower meal" - kala-sooc badan oo ka mid ah fibre, borotiinka dabiiciga ah, fosfooraska, potassium, fitamiinada iyo dhammaan noocyada macdanta iyo wax lagu daro. Waxaa xusuus mudan in ay tahay cunto gaar ah oo qiimo leh, oo ay ku jirto in ka badan 35% borotiinka caanaha, wax ka yar 15% caanaha, iyo in ka badan 1.5% dufanka. Taas waxaa loola jeedaa, inay yar tahay lizin, inkastoo tan si fudud loo magcaabo fitamiin B iyo E. Waxyaabaha kale, sheyga quudinta ayaa aad u hodan ku ah niacin, choline, pantothenic acid, pyridoxine.
Waa muhiim! Isticmaalka cuntada kuleylaha ayaa mararka qaar aheyn mid aan macquul ahayn, laakiin sidoo kale waa la mamnuucay, maadaama badeecadani ay ku jirto kiimikooyinka chlorogenic iyo quinic.
Aan soo koobno: kala duwanaanshaha alaabta
Hadda oo qof kastaa uu leeyahay fikrad ah waxa cunta gabbaldayaha waa, waa in weli la ogaadaa in labadan waxyaabood ay leeyihiin kala duwanaansho gaar ah, lagu go'aamiyey inta badan sida habka loo soo saaro.
Inta badan qaladaadka ka dhexeeya waxyaabaha kor ku xusan waxay ku jiraan halbeegga iyo hababka waxqabadka dugsiga sare waxsoosaarka qashinka.
Xaqiiqooyinka casriga ah, tiknoolijiyada waxsoosaarka ugu weyn ee geedi-socodka geed-socodka ayaa gaari kara cantalyaaga, taas oo ah natiijada tayada qalabka wax soo saarka ah wax yar ka duwan, iyo natiijada, kala duwanaanta cake iyo cuntadu waa mid aan muhiim ahayn.
Ma taqaanaa? Caan ka mid ah noocyada lagu qeexay quudinta ee beeraha casriga ah waxay ku dhow yihiin isla'eg, sida lagu caddeeyey saamiga isku midka ah ee iibka gudaha suuqa gudaha. Tani waxay ku saleysan tahay, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in waxtarka codsiga cuntada iyo cuntada ee beeraha ay ku filanyihiin.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad fahamto in cuntada la helo habka saarista, taas oo ah, in la burburiyo haraadiga waxsoosaarka ugu weyn ee walxaha gaasku leeyahay, iyo keegga, marka loo eego, adigoo riixaya. Marka la eego tan, muuqaalka muuqaalka ah ee cuntada waa kala duwan yahay.
Qodobbada kala duwan ee udhexeeya cake iyo cuntadu waa waxyaabaha dufanka lehwaa in sidoo kale la tixgeliyaa marka la go'aaminayo waxa faraqa u dhexeeya iyaga. Dabeecaddan, farqigaas ayaa ah natiijada habka wax soo saarka, maaddaama miro la cadaadiyo ay si buuxda u hayso hadhaaga dufanka ee qashinka qashinka ku saleysan iyo waxa ku jira ilaa 15%. Cuntada, lagu kala diro walxaha gaasaska, habka loo shaqeynayo luminta qayb ka mid ah qaybta dufanka iyo waxa ku jira kaliya ilaa 2-3%.
Intaa waxaa dheer, in la raadiyo jawaabta su'aasha: "Waa maxay farqiga u dhaxeeya cuntada iyo saliidda?", waxaa suurtagal ah in la xusuusto boqolkiiba ee fiber iyo borotiinka. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in keega uu had iyo jeer ka kooban yahay amarro badan oo ka mid ah qaybahaas marka loo eego wax soo saarka nafaqada yar iyo faa'iido leh.
Gabbalaha geedka waxaa loola jeedaa dalagga silage, taas oo ah alaabta ceeriin ah ee soo saarista qashinka.
Iyadoo aan loo eegin farqiga u dhexeeya cake gabbaldayaha iyo cuntada qorraxdu, hordhaca ay u leedahay cuntada ee xoolaha iyo digaaga ku dhawaad ​​si isku mid ah waxtar u leh (oo muujinaysa kororka soo-saarka ukunta iyo kororka xaddiga koritaanka ee dhalinyarada).
Iskudhicirka qiimaha jaban ee badeecooyinka quudinta iyo walxaha sare ee qaybaha iyo macdanta ayaa ka dhigaya cunto karaqo iyo miro saliid ah oo aan ahayn midka ugu macquulsan, laakiin sidoo kale si aad ah waxtar ugu leh quudinta xoolaha iyo digaaga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cuntada xayawaanka 2020